Fampiharana Twitter momba ny asa aman-draharaha 10 ho an'ny orinasa | Martech Zone
Alahady, May 10, 2009 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Fitaovana vitsivitsy dia manomboka miseho ho an'ny orinasa hitantana ny fifandraisana mampiasa Twitter na amin'ny fampiasana bilaogy bitika anatiny ao anatin'ny orinasan'izy ireo.
Izaho dia nitantana nanery ny Martech Zone fahana amin'ny fampiasana Twitter Twitterfeed. Rehefa sendra fotoana fohy aho rehefa nampiseho ny Twitterfeed tamin'ny webinar iray vao haingana, na izany aza, nizara ny mpijery sasany fa misy fitaovana lehibe hafa any. Nanapa-kevitra ny hijery aho!
Fitaovana fitantanana Twitter ho an'ny orinasa
ExactTarget SocialEngage (Cotweet ofisialy) manolotra ny fahaizana mitantana kaonty marobe, mandahatra bitsika, cotagging ny lahatsoratra miaraka amina lohateny voalohany an'ny mpanoratra, alefa amin'ny kaonty marobe sy ny dalam-piasana sasany - ny fahaizana manome bitsika ho an'ny mpikambana iray amin'ny orinasa hafa. Azonao atao koa ny manampy hafatra rehefa manome ny bitsika. SocialEngage dia ao anatin'ny fianakaviana Salesforce ExactTarget ankehitriny!
Hootsuite dia suite matanjaka - ao anatin'izany ny mpampiasa, ny tonian-dahatsoratra, ny feed automatique Twitter, ny kaonty marobe, ny bitsika voalahatra, ny mandefa amin'ny kaonty marobe, ny mpanafoana URL misy statistika, Ping.fm fampidirana ary na dia ny fahaizana mampiditra Adsense aza rehefa alefa ilay URL fohy.
Ity no vahaolana matanjaka indrindra amin'ity sokajy ity. Ny singa tokana tsy hita amin'ity vahaolana ity, na izany aza, ny fitantanana ny workflow amin'ny fanomezana andraikitra sy fanaraha-maso ny lahasa.
Twinterface dia ao anaty beta mihidy ary tsy afaka nijery ny vahaolana amin'izao fotoana izao aho. Nilaza i Howard fa mandamina olana vitsivitsy izy ireo amin'ny fanomanana ny fiainana. Manantena aho ny hahita izay atolotry ny Twinterface izay tsy mitovy amin'ireo fonosana etsy ambony. Amin'izao fotoana izao, Twinterface dia mampiroborobo ny kaonty marobe sy mpampiasa marobe ho endri-javatra ankehitriny.
Ity dia sokajy azo antoka fa hahazo fifaninanana haingana, noho izany antenaina fa tsy mahatratra fotsiny ny Twinterface - antenaina fa ho tonga eo amin'ny latabatra izy ireo miaraka amina endri-javatra mamaky tany.
Fitantanana laza eo amin'ny Twitter
Izay nanangana ny Fampandrenesana Google hanandrana hanara-maso Twitter dia tsy ho ela dia ho hitany fa tsy tonga fotsiny ireo fanairana… ary rehefa tonga izy ireo dia tara loatra ny fotoana.
Manampy an'izay ny fahasarotana amin'ny fitantanana bitsika an-jatony manerana ny kaonty tsy tambo isaina ary ny fikorontanan-tsaina sy ny fanatanterahana tsy mahomby dia ho avy tsy ho ela. Radian6 dia fitantanana lazan'ny haino aman-jery sosialy fitaovana izay manana endrika an-taonina - ao anatin'izany ny fanaraha-maso amin'ny fotoana tena izy ny loharanom-baovao sosialy rehetra, ny onjam-peo feno ary ny mandeha ho azy.
Radian 6 dia mandray ny sehatr'izy ireo amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Webtrends koa. Ny fanangonana ny hetsika ivelan'ny tranonkala sy ny fanaraha-maso laza eo an-toerana Analytics ho goavana ho an'ny indostria.
Automation manerana ny haino aman-jery sosialy
Raha tsy te hampiasa Twitter fotsiny ianao, fa mandefasa tambajotra 40 hafa, Ping.fm no fitaovana ho anao! Ny Ping.fm dia ahitana ny fahaizana mampifangaro ireo fitaovanao ara-tsosialy amin'ny finday amin'ny alàlan'ny SMS, mailaka ary fandefasana hafatra eo noho eo. Ny serivisy dia manolotra ihany koa fandefasana hafatra namboarina.
Ping.fm dia mety ho antsy miaramila miaramila manao automatisation fandefasan-kafatra ao amin'ny haino aman-jery sosialy! Amin'ireo rindranasa rehetra voatanisa amin'ity lahatsoratra ity, ity no fampiharana iray izay tsy tokony hisy raharaham-barotra raha tsy misy.
Fitorahana bilaogy mikraoba anaty orinasa
Alao an-tsaina ny fanomezana hery ny mpiasanao amin'ny fahaizana hanana fitaovana bilaogy micro-anatiny anaty azo antoka. Afaka miaraka amina fampiharana vaovao roa eny an-tsena ianao izao:
Araka ny Socialcast toerana:
Hatramin'ny 2005, Socialcast dia mpamatsy lozisialy amin'ny tambajotran-tserasera sy vahaolana ho an'ireo mpanjifa miatrika mpanjifa sy mpanjifa orinasa. Miorina ao Irvine, California, Socialcast no hany mpanome SaaS vondrom-piarahamonina tambajotran-tserasera asa fanompoana manokana. Ny rindrambaiko dia manambatra ireo fiasa intranet nentim-paharazana miaraka amin'ny teknolojia fandefasan-kafatra ara-tsosialy mba hanomezana hery ny mpiasa hanitatra, hamorona ary hizara fahalalana manerana ny orinasa.
Tsy manam-paharoa amin'ny Socialcast ny fahaizana manontany ary manana fanontaniana voavaly, mamorona fototra fahalalana anatiny lehibe ho an'ny orinasa. Socialcast koa dia mitaky fahaizana momba ny asa ara-tsosialy? suite an'ny Analytics fitaovana - fa ny sary kosa dia toa maivana amin'ny vavahady misy azy… toa tatitra tsotra fotsiny izany.
Araka ny Yammer toerana:
Yammer dia fitaovana iray hampamokatra ny orinasa sy ny fikambanana amin'ny alàlan'ny fifanakalozana valiny fohy matetika amin'ny fanontaniana tsotra iray: 'Inona no ataonao?'
Rehefa mamaly izany fanontaniana izany ny mpiasa dia noforonina amin'ny toerana afovoany ny fahana hahafahan'ny mpiara-miasa miresaka momba ny hevitra, mandefa vaovao, mametraka fanontaniana ary mizara rohy sy fampahalalana hafa. Yammer koa dia miasa ho toy ny lahatahiry ao amin'ny orinasa anaovan'ny mpiasa tsirairay mombamomba azy ary toy ny tobim-pahalalana ahafahan'ny resadresaka taloha azo idirana sy resahina.
Araka ny tranokala Present.ly:
Manome ny mpiasanao ny fahaizana mampita eo no ho eo ny toe-panahin'izy ireo ankehitriny, manontany sy mamaly fanontaniana, mizara haino aman-jery ary bebe kokoa amin'ny fomba fifandraisana revolisionera notarihin'ny Twitter ny Present.ly.
Toa manana fahaiza-manao matanjaka be izao, anisan'izany ny Groups, Attachments, ary API mifanaraka amin'ny Twitter.
Marketing ara-jeografika sy teny ifotony amin'ny Twitter
Tsy toy ny haino aman-jery dokam-barotra hafa mipoitra ao amin'ny Twitter, Twitterhawk dia ahafahan'ny orinasa mamaly mivantana ireo mpampiasa, amin'ny teny lakile na fehezanteny, ary koa amin'ny toerana jeografika. Ity dia rafitra iray izay notsapaiko tamin'ny halavany ary tiako ny fampiasa amin'ny.
Atambaro ireo fampisehoana ireo amin'ny fampandrenesana mailaka (isaky ny mandefa ny bitsika ny rafitra) sy ny fahaizana manara-maso ireo URL fohy (toy ny amin'ny Hootsuite), ary ity dia ho fampiharana varotra sokajy manerantany!
NAOTY: 5/13/2009 Nijanona tsy naneho valiny (@) tamin'ny olona tsy arahinao fotsiny ny Twitter, noho izany dia mety hisy fiatraikany lehibe amin'ny fampiharana toa ny Twitterhawk satria Twitterhawk dia mampiasa valiny ho fitaovana hampiroboroboana.
Manaova vondrona ao amin'ny Twitter
Tsy manana fiasan'ny vondrona ny Twitter, fa afaka manararaotra ianao Grouptweet handresena ny lesoka. GroupTweet dia mamela vondrona iray handefa hafatra amin'ny alàlan'ny Twitter izay alefa manokana avy hatrany amin'ny mpikambana ao amin'ny ekipa.
Ny fananganana vondrona ho an'ny orinasanao sy ny mpanjifanao dia fitaovana mety handefasana hafatra lehibe haingana sy haingana!
Betsaka ny fitaovana any an-toerana izay mampiroborobo ny tenany amin'ny maha-fangatahana fitantanana orinasa voalohany an'ny Twitter; na izany aza, ny ankamaroan'izy ireo dia maivana amin'ny endri-javatra. Ho an'ny orinasa rehetra, Analytics ary mila mandeha ho azy ny automatisation. Ny endri-javatra rehetra izay ampiana a fampiharana twitter asa aman-draharaha mila miantoka fa azo lazaina ho fanatsarana ny fiverenan'ny fampiasam-bola amin'ny ezaky ny haino aman-jery sosialy ataon'ny mpiasanareo.
Tags: cotweeteksaktongtarget socialengagegrouptweethootsuiteping.fmankehitrinyradian6socialcastfiaraha-moninatwinterfacetwitterhawkyammer
Ampidiro ny fampielezan-kevitra Google Analytics Querystring amin'ny alàlan'ny jQuery
May 11, 2009 ao amin'ny 5: 29 PM
Misaotra indray amin'ny fanolorana an'i Radian6. Mahagaga ahy fotsiny hoe firy ny fitaovana, sehatra, fampiharana ary ny toy izany tsy mitsaha-mitombo eny an-tsena. Porofo tsara amiko fa zava-dehibe ny haino aman-jery sosialy ka tsy mijery fotsiny ny olona, ​​fa mikasa ny hitantana ny fandraisany anjara. Tsy inona izany fa zavatra tsara.
Enga anie ho salama daholo.
Talen'ny vondrom-piarahamonina, Radian6
May 12, 2009 amin'ny 11: 12 AM
Misaotra tamin'ny vaovao tsara momba ny Twitter. Izaho dia vao haingana ary vao mianatra ny fahaiza-manao. Manampy ahy handroso haingana kokoa ny zavatra tahaka izao.
Jun 25, 2009 ao amin'ny 12: 11 PM
Lahatsoratra mahafinaritra! Misy fitaovana sy fampiharana mahafinaritra be dia be any. Na dia tsy tena fitaovana ho an'ny orinasa aza izy io, dia tiako manokana Ref.ly. Fitaovana tsara ho an'ny olona te hizara andinin-teny ao amin'ny Twitter izy io.
Jolay 1, 2009 amin'ny 1:11 PM
Miaraka amin'ny Radian6, tena manoro hevitra aho Backtweets, fampiharana izay 'manafohy' ny URL ary afaka mampitandrina anao rehefa nahavita izany tao amin'ny Twitter ny tranokalanao!